အသက် 40 နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများ (2013) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
40 လက်အောက်တွင်အမျိုးသားများအတွက် Erectile အလုပ်မဖြစ်၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းရင်းများ (2013)
Urol Int ။ 2013 နိုဝင်ဘာ 21 ။
Ludwig W, Phillips က M.
Urology ဦး စီးဌာန၊ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာ၊ ဂျော့ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်၊ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ အမေရိကန်။
အသက် ၄၀ မပြည့်သေးသောယောက်ျားများသည် erectile dysfunction (ED) ခံစားရသောအမျိုးသားများရှိသည်။ အတိတ်ကာလများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများစုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝအရမှတ်ယူကြသည်။ လေ့လာမှုများအရအော်ဂဲနစ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၇၂% အတွင်း ED ၌ ၄၀ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်။ Organic etiologies များတွင်သွေးကြော၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ Peyronie's ရောဂါ (PD)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် endocrinologic ရင်းမြစ်များပါဝင်သည်။ သွေးကြောဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများကိုပုံမှန် focal သွေးလွှတ်ကြော occlusive ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သည်။ နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများရှိသည့်လူငယ်များသည်ကျောရိုးနှင့်နီးကပ်သောနေရာတွင်ရှိသော ED သည်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ PD နှင့်အတူအမျိုးသား ၈% သည်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ED ခံစားနေရသည်။ ED ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆေးများတွင်စိတ်ကျဆေးများ၊ NSAIDs နှင့် finasteride (Propecia), antiepileptics နှင့် neuroleptics တို့ပါ ၀ င်သည်။ ငယ်ရွယ်သောလူ ဦး ရေတွင်ဟော်မုန်းအရင်းအမြစ်များမှာအဆန်းမဟုတ်သော်လည်း Klinefelter ၏ရောဂါ၊ မွေးရာပါ hypogonadotropic hypogonadism နှင့် hypogonadotropic hypogonadism တို့ပါဝင်သည်။ ED နှင့်အတူလူငယ်များ၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်သမိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပါဝင်သင့်ပါတယ်။ လူငယ်များတွင် ED သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာသိသိသာသာပျံ့နှံ့မှုသည် nocturnal penile tumescence testing and penile Doppler ultrasound ကိုချက်ချင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ED တိုးတက်စေနိုင်သည့်ကုသမှုနည်းလမ်းများတွင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပါးစပ် PDE-40 inhibitors တို့ပါ ၀ င်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လုံလောက်သောစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုသည်လွန်ခဲ့သော 50 နှစ်များအတွင်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။1] ။ တစ်ချိန်က psyche တွင်အမြစ်တွယ်နေသောပြaနာဟုယူဆပြီးသည်နှင့် ED သည်ယခုအခါဇီဝကမ္မအခြေခံကိုမကြာခဏနားလည်လာသည်။2] ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်သောသွေးကြော၊ အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းပုံမှန်မဟုတ်မှုများအပါအ ၀ င်အော်ဂဲနစ်အရင်းအမြစ်များသည်အသက်ကြီးသူများတွင် ED အားဖြင့်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများဖြစ်ပြီးအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ ED ကိုအထောက်အကူပြုသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များသာရှိသည်ဟုမကြာခဏမှတ်ယူကြသည်။ သို့သော်စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုသည် ED ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည်သွေးကြော၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ၊ ED သည် psychogenic ဖြစ်သည်ဟုယူဆလျှင်သိသာထင်ရှားသောနောက်ခံရောဂါများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
52-40 ၏အသက်အရွယ်ရှိအမျိုးသားများ၏ 70% တွင် ED အဆင့်အချို့ရှိပြီးအလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါများသည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူသိသိသာသာများပြားလာသည်။2] ။ 40 အောက်ရှိ ED နှင့်အတူအမျိုးသားများရာခိုင်နှုန်းသည်လေ့လာမှုနှင့် ED ၏အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများအရဇယားတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ 1။ IIEF948 ရမှတ် <၂၁ ရှိသူ ၉၄၈ ယောက်ကိုတူရကီနိုင်ငံ၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုနှင့်အတူ RigiScan နှင့် penile Doppler ultrasound တို့ဖြင့်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသား ၁၄.၈% သည် ED ကိုအော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများကြောင့်တွေ့ရှိရသည်။ ဤသည် arteriogenic 5, venogenic 21, neurogenic 14.8, endocrinologic 40, မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် 32, ရောထွေးအမျိုးအစား 16.6 နှင့်မသိသော 12.8% အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များများစွာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်3].
စားပွဲတင် 1 ။ 40 လက်အောက်ရှိအမျိုးသားများတွင် ED ၏ပျံ့နှံ့မှုသည်ကွဲပြားသောအသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းရှိအမျိုးသားများအားလေ့လာမှုအမျိုးမျိုးတွင်တွေ့ရှိရသည်
ED ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သောအခြားတူရကီလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အရောင် Doppler ultrasound၊ ပြောင်းလဲနေသော pharmacocavernosometry၊ ရွေးချယ်ထားသော pudendal pharmacoarteriography နှင့် RigiScan တို့ပါဝင်သော NPT အပါအဝင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရောဂါရှာဖွေရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး 45% ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။4] ။ အမေရိကန်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် 100 အောက်ရှိ ED နှင့်အတူပါဝင်သော 40 အမျိုးသားများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ 72 ကို vasculogenic ED, 12 neurogenic ED နှင့် 13% တွင်သာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။5].
ပျားရည်ဆမ်းခရီး၏အားနည်းချက်ကိုသဘာဝအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမှတ်ယူခဲ့သည်၊ သို့သော် 90 အမျိုးသားများသည်ပျားရည်ဆမ်းခရီး၌အားနည်းခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီးအူမကြီးထွားသော papaverine နှင့် Self- stimulation (CIS)၊ NPT နှင့်အရောင် Doppler ultrasound တို့ဖြင့်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ 27.7% etiology အတွက် neurogenic ခဲ့ကြသည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Etiology
40 အောက်ရှိအမျိုးသားများတွင် ED ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော etiologies ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုဇယားတွင်ပြထားသည် 2.
စားပွဲတင်2။ 40 အောက်ရှိအမျိုးသားများတွင် ED ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော etiologies ၏အကျဉ်းချုပ်
သွေးကြောဆိုင်ရာ ED ရှိသူလူငယ်များသည်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ perineal စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ချက်များစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းကို ED နှင့်အတူလူ ၉၁ ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့သည့်အပြင်လိင်တံ angiography ခံစားခဲ့ရသော perineal စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းကြောင်းမရှိသောလူငယ်များသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် focal arterial occlusive disease နှင့် subclinical trauma နှင့်ထိတွေ့မှုများရှိကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကထောက်ခံခဲ့သည်။6] ။ ဤအယူအဆကိုစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ED အကြားဆက်သွယ်မှုကထောက်ခံသည်။ ဒီဆက်နွယ်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်များအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာလေ့လာမှုအရ3ထက်ပိုပြီးစက်ဘီးစီးနေတဲ့လူငယ်တွေဟာ ED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအန္တရာယ်ပိုများကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။7] ။ စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်စက်ဘီးထိုင်ခုံများမှ perineal ဖိအားများကြောင့်0သို့ cavernosal artery အမြင့်ဆုံးအရှိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး penile သင်္ဘောများခေတ္တပိတ်ဆို့ကာ focal arterial occlusive disease သို့ပို့ဆောင်သည်။7].
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ ED ၏မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမရှိသောလူငယ်များသည်သွေးပေါင်ချိန်၊ C-reactive protein protein၊ စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောနှင့် triglyceride အဆင့်များနှင့် carotid intima-media အထူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားသည့် subclinical endothelial disfunction ၏သက်သေများရှိသည်။ ED နှင့်အတူသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအတွက်အန္တရာယ်နိမ့်ကျသောလူငယ်များကို ED မပါသောလူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းတို့သည်စီးဆင်းမှု -mediated brachial vasodilatation, မြင့်မားသော systolic သွေးဖိအား၊ C-reactive protein protein, cholesterol နှင့် triglycerides, carotid intima- ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် မီဒီယာအထူနှင့် Framingham အန္တရာယ်ရမှတ်များ, သို့သော်ဤတန်ဖိုးများအားလုံးပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းရှိကြ၏8] ။ ဤလေ့လာမှုကသက်သေပြနိုင်သောအရင်းအမြစ်မရှိသော ED ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများစွာသည် subclinical နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် ED အတွက် neurogenic အန္တရာယ်အချက်များရှိသည်။ နာတာရှည်နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါများရှိသည့်အမျိုးသားများ၏လေ့လာမှုတွင် 28.4% သည် 40 ထက်ငယ်သောလူငယ်များသည်နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါများအကြားတွင် 2.2 အကြိမ်တွင် ED ဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုးပွားစေသည်။9] ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါရှိသူများအကြားတွင် ED ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမြင့်မားသည် - အသက် ၂၂ နှင့် ၅၀ ကြားရှိအမျိုးသား ၈၀ ကိုလေ့လာမှုတွင် ၄၂.၅% တွင် ED ရှိကြသည်။10] ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါရှိသည့်လူငယ်များသည်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါမရှိသောအမျိုးသားများထက် 1.8-3 အဆ ED ထက်ပိုများသည်။11].
စိတ်ဒဏ်ရာသည်သွေးကြောနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ED နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် perineal စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း femoral ကျိုးခြင်းကဲ့သို့သောအနီးအနားရှိအဆောက်အအုံများမှစိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ 40 လက်အောက်ရှိယောက်ျားများသည် intramedullary nail ဖြင့်ကုသသော femoral ရိုးတံကျိုးခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါ tibial ကျိုးလွယ်သည့်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ED ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ခေါင်းကိုထိန်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ femoral ခေါင်းကိုအသားအရေလှီးသတ်ဖြတ်ပြီးနောက်၊ 40.5 အမျိုးသားများသည် ED မှပျော့မှအလယ်အလတ်အထိ ED ခံစားခဲ့ရသည်။12] ။ 4-19 အသက်အရွယ်ရှိသည့် 37 အမျိုးသားများ၏အဖြစ်အပျက်စီးရီးသည် femoral ကျိုးပဲ့မှုကို femoral nail နှင့်ပြုပြင်ပြီးနောက် ED မှခံစားခဲ့ရသည်။4ကိစ္စများတွင် EDE သည် PDE-1 inhibitor ဖြင့်ကုသမှုနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက် 2-5 ကုသမှုပြီးနောက်ပြေလည်သွားသည်။13].
Neurological ပျက်စီးမှု lumbar ကျောရိုး၏ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစဉ်အတွင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ 34.3 အောက်ရှိယောက်ျားများ၏ 50% သည် lumbar ကျောရိုးကိုခွဲစိတ်ကုသမှုနှိမ်နင်းခြင်းကိုခံယူပြီးနောက်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် ED ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။14].
Peyronie ၏ရောဂါ (PD) ရှိအမျိုးသားများတွင် ED ၏တိကျသောယန္တရားကိုမသိရသေးပါ။ PD သည်အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ဒဏ်ရာမှ tunica albuginea သို့ထိရောက်စွာရောက်ရှိခြင်းသည်နောက်ဆုံး၌ penile curvature နှင့် ED ED နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသော plaque တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြားဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သိသိသာသာအချိန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ PD တိုးပွားလာသည်။ သို့သော် PD နှင့်အတူလူနာများ၏ ၈.၂% သည်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးထိုအမျိုးသားများ၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ED ရှိကြသည်။ အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများ၌ PD စတင်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့် ပို၍ စူးရှပြီးအများအားဖြင့် intracavernosal ထိုးဆေးများဖြင့်အောင်မြင်စွာကုသနိုင်သည်။15] ။ ရံဖန်ရံခါ, PD ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ PD နှင့်အတူ 32 ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရဤလူများ၏ 37% တွင် ED ရှိကြောင်း၊ မည်သူတို့တွင် hemodynamic ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ခြင်းနှင့် PD ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများထက် plaque များအကြိမ်များစွာရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။16].
SSRI များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း ED ကိုအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ cigiopram (Celexa) သို့မဟုတ် fluoxetine (Prozac) ကိုသုံးပြီးအမျိုးသားများကိုကျိုးကျွံပြုခြင်း၊ double blinded study ၌ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Eigiile function ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ RigiScan နှင့်တိုင်းတာသည်။17] ။ 5-HT သည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အခြားရှုထောင့်များကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။18].
ယောက်ျားပြောင်သောဆံပင်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရန် Finasteride ကိုငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားလူ ဦး ရေတွင်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် 1.4 အရွယ်ရှိသူ finasteride ကိုယူသောလူများ၏ 31% သည် ED ခံစားခဲ့ရသည်။19] ။ 71-21 မှအသက် 46 တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာတွင် MPB သည် finasteride အသုံးပြုမှုသည် ED အစီရင်ခံသူ 92% အပါအ ၀ င်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။20] ။ ပုံမှန် NSAID အသုံးပြုမှုသည် ED အတွက် 2.4 ၏အလေးသာမှုအချိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်။21].
prolactin အဆင့်တိုးလာခြင်းကြောင့်မျိုးကွဲအားလုံး၏ Neuroleptics များသည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလူသိများကြသည်။22] ။ Antiepileptic ဆေးများသည် ED နှင့်ဆက်စပ်နေပြီး vasogenic effect ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။23].
ငယ်ရွယ်သောလူ ဦး ရေတွင် ED ၏ဟော်မုန်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်များမှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာကြောင့် ED ကိုလူကြီးတွေမှာများတယ်။ 50 အောက်ရှိ ED ရှိအမျိုးသားများသည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့် prolactin ပမာဏကိုတိုင်းတာသောအခါ၊ ယောက်ျား၏ 4% သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းသည်။ သို့သော်ဤလူ ဦး ရေတွင် ED ကိုအထောက်အကူပြုသည်မှာမရှင်းလင်းပေ။ testosterone ဟော်မုန်းလျော့နည်းမှုကိုခံစားနေရသည့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံထားရသောလူငယ်များစွာရှိသည်။24].
ပစ္စုပ္ပန်အခါ, ED ၏ဟော်မုန်း etiology Klinefelter ရဲ့ syndrome ရောဂါ (KS), မွေးရာပါ hypogonadotropic hypogonadism (CHH), ဝယ်ယူ hypogonadotropic hypogonadism (AHH) နှင့် cryptorchidism ပါဝင်နိုင်သည်။ KS 1 ၏ပျံ့နှံ့: 500-1,000 ။ အရေးကြီးသည်မှာ KS ရှိအမျိုးသားများစွာသည် eunuchoid ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ micropenis နှင့် microorchidism ၏ပြဌာန်းစာအုပ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မရှိပါ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်သာမန်အားဖြင့်သာမန်အမျိုးသားများသာဖြစ်ပုံရသည်။ KS ရှိအမျိုးသားများသည်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၊ KS ရှိသူများတွင် testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ကျပြီး LH, FSH နှင့် estradiol များပါလိမ့်မည်။25] ။ မကြာသေးမီကလိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပါ ၀ င်သည့်လူနာ ၁,၃၈၆ ဦး အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုကလေ့လာခဲ့သည်။ Karyotype ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ testis အသံအတိုးအကျယ် <2010 ml နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအသက် ၄၀ ရှိသောအမျိုးသား ၂၃ (၁.၇%) သည် KS ရှိကြသည်။ KS ရှိအမျိုးသား ၂၂.၇% သည်ပြင်းထန်သော ED ခံစားခဲ့ရသည်။26] ။ 32.2 နှစ်ကာလပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ရှိသည့် KS ရှိအမျိုးသားများအတွက်ကြိုတင်လေ့လာချက်အရ 2.5% တွင်ပြင်းထန်သော ED တွေ့ရှိခဲ့သည်။27].
Kallmann syndrome ရောဂါပါဝင်သော CHH သည် 1 / 4,000-10,000 ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူရှားပါးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ချို့ယွင်းမှုနှင့်အတူရှိနေသောလူနာများ  ။ testhone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှု (TRT) ဖြင့်ကုသသော CHNUMX အမျိုးသားများအားလေ့လာမှုမတိုင်မီက 39% သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ (erectile function ကိုအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတိုင်းအတာမေးခွန်းလွှာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသော်လည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ) ။ TRT သည်ဤအစုစပ်ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။29] ။ သို့သော်၊ မိုက်ခရိုနင်နီများရှိနေခြင်းသည်အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဟန့်အတားဖြစ်သည်။30].
AHH သည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခေါင်းကိုစိတ်ဒဏ်ရာ၊ prolactinoma၊ sellar သို့မဟုတ် infundibular cyst၊ pituitary ခွဲစိတ်မှု၊ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုကဲ့သို့သော hemochromatosis နှင့် sarcoidosis တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။31] ။ ED နှင့် libido ဆုံးရှုံးမှုများမကြာခဏဤအခြေအနေနှင့်အတူလိုက်ပါ။ စစ်ဆေးမှုကို LH, FSH နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များပြုလုပ်နိုင်ပြီးလက်တွေ့သံသယရှိသောကိစ္စများတွင် sella ၏ MRI ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။32].
Cryptorchidism သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းစေနိုင်သည်။ 49 လများနှင့် 10 နှစ်များအတွင်း orchiopexy ကိုခံယူခဲ့သည့် cryptorchidism ရှိ 13 လူနာများအားလေ့လာမှုတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအရအားနည်းသည်။33].
ရှားပါးသော်လည်းမြင့်မားသောပဲပုပ်အစားအစာနှင့် ED အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ daidzein, ပဲပုပ် isoflavone, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ အတော်များများသောပမာဏသည်ကော်လာဂျင်များလာခြင်းနှင့်ချောမွေ့သောကြွက်သားနှင့် elastic fiber ပါဝင်မှုများအပါအဝင်ကြွက်များ၏ penile ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊34] ။ လူငယ်ကြွက် daidzein နှင့်ထိတွေ့သောအခါကြွက်တစ် ဦး ထိုး - မှီခိုထုံးစံ၌အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှရင့်ကျက်သောအခါ, erectile function ကိုချို့ယွင်း  ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပြင်၊ 18 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည် hypogonadal ED တီထွင်ခဲ့သောအစားအစာကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းမြင့်မားသောပဲပုပ်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကြောင့်ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာရှိခဲ့သည်။36].
ဆီးချိုရောဂါနှင့် hyper- နှင့် hypothyroidism ကဲ့သို့သော endocrine မူမမှန်ရောဂါရှိသူများသည်ရောဂါကင်းစင်သည့်အမျိုးသားများထက် erectile ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသိသိသာသာပိုမိုဆင်းရဲစေသည်။37] ။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ED နှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း 50 လက်အောက်ရှိအမျိုးသားများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။38].
လူငယ်များအတွက် ED အတွက်အန္တရာယ်အချက်များ
သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ED နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအကြားဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်း ED အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိရသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ 18-40 အရွယ်ရှိအမျိုးသားများတွင်ပညာရေးအဆင့်နိမ့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပြ,နာများ၊ လိင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းကြောင်းမရှိခြင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ အထိုက်အလျောက်နေထိုင်မှုပုံစံ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု ED မှဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့မတွေ့ရှိရ  ။ အော်ဂဲနစ် ED ဟုသိကြသော 40 လက်အောက်ရှိအမျိုးသားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုသာ ED နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးအဝလွန်ခြင်း၊ dyslipidemia၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။40].
40 ED နှင့်အတူလက်အောက်ရှိအမျိုးသားများအတွက်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမတူကွဲပြားမှုများသည်သမိုင်းကြောင်းကိုစေ့ဆော်ပေးသင့်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးသမိုင်းကြောင်း၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အချိန်ပမာဏ၊ ကျောရိုးသို့မဟုတ်ပေါရိုးသို့ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ penile အဖြစ်များတတ်သည်၊ ဆေးဝါးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအခြေအနေ၊ အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ယခင်ဆီးချိုရောဂါအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများအပါအ ၀ င်အတိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ နှင့် hyper- နှင့် hypothyroidism ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၊ anosmia၊ testicular volume၊ penile အရှည်၊ သွေးပေါင်ချိန်နှင့် penile curvature ၏တည်ရှိမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်သောလိင်အင်္ဂါစစ်ဆေးခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
ဟော်မုန်းမူမမှန်မှု၏နိမ့်ကျမှုသည်ဆေးခန်းသမားအား testosterone ဟော်မုန်းကိုဒုတိယအဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပုံမှန်မဟုတ်ပါကထည့်သွင်းရန် ဦး ဆောင်လိမ့်မည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပြည့်စုံသောဇီဝဖြစ်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်သည်၊ သို့သော် ED နှင့်အတူလူငယ်များတွင်ဆက်စပ်သောဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းမရှိသောကြောင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်မည်သည့်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမျှပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သွေးကြောဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းကအခြား etiologies ရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်ကြသည်မှန်လျှင် NPT နှင့် penile Doppler လေ့လာမှုများနှင့်အတူ workup စဉ်းစားရန်ဆေးသမားအားပေးသင့်ပါတယ်။ intracavernous ဆေးထိုးနှင့် audiovisual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးပေါင်းစပ် Doppler လေ့လာမှုစဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မ erectile တုံ့ပြန်မှု၏မှတ်တမ်းတင်တိုးတက်စေလိမ့်မည်41].
အော်ဂဲနစ် ED ရှိသည့်အမျိုးသားများအတွက်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူမီစဉ်းစားသင့်သည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် ED အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်မဟုတ်သော်လည်း 35-55 ရှိအမျိုးသားများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းကိုလေ့လာနိုင်သည်။42] ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာလေ့ကျင့်ခန်းသည် 40 အောက်ရှိအမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော erectile function နှင့်ဆက်စပ်သည်။43] ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင် ED နှင့်ဆက်နွယ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောအပြုအမူများဖြစ်သောကြောင့်ရပ်စဲသင့်သည်။ ED အတွက်ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်ပြစ်မှုထင်ရှားသောဆေးကိုရပ်ဆိုင်းသင့်သည်။ SSRI သောက်သူများအတွက် 20 mg ၏ tadalafil mg သည် erectile function ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေကြောင်း၊44] ။ Trazodone သည် SSRI ကိုသောက်သောအမျိုးသားများတွင် ED ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။45].
မည်သို့ပင် etiology မည်သို့ပင်, ကုသမှုအမြဲတမ်းပါးစပ် PDE-5 inhibitors နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ KS, CHH, AHH hypogonadism ကြောင့် ED အတွက် TRT က EF အတွက်တိုးတက်မှုကိုမကြာခဏ ဦး ဆောင်လိမ့်မယ်။ PDE-5 ၏မအောင်မြင်မှုသည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ alprostadil urethral suppositories, papaverine, Bimix သို့မဟုတ် Trimix ကို intracavernosal ထိုးဆေးများနှင့်နောက်ဆုံးတွင် penile Prosthesis ကုသမှုများကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယခင် vasculogenic ED ရှိအမျိုးသားများတွင် EF တိုးတက်စေရန်ခွဲစိတ်ကုသရန်အသုံးပြုခြင်းသည်ရေရှည်ရလဒ်ကောင်းများမရရှိခဲ့ဘဲပုံမှန်အသုံးပြုရန်အကြံပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။46] ။ သို့သော်၊ focal arterial occlusive disease ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည့်အမျိုးသားများအတွက်၊ Penile microvascular arterial ခွဲစိတ်မှုသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။47].
Shamloul R, Ghanem H: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Lancet 2013; 381: 153-165
Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB: Impotence နှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ - မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းမှုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များ။ J ကို Urol 1994; 151: 54-61 ။
Caskurlu T, Tasci AI, Resim S, Sahinkanat T, Ergenekon E: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ etiology နှင့်တူရကီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ပံ့ပိုးအချက်များ။ int J ကို Urol 2004; 11: 525-529 ။
Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus A, Basak: အသက် 40 အောက်ရှိ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: etiology နှင့်အထောက်အကူပြုအချက်များ၏အခန်းကဏ္။ ။ ScientificWorldJournal 2004;4(suppl 1): 171-174 ။
Donatucci CF, Lue TF: 40 အောက်ရှိယောက်ျားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: etiology နှင့်ကုသမှုရွေးချယ်မှု။ int J Impot Res 1993; 5: 97-103
Lehmann K ကို, Schöpke W, Hauri: D: perineum မှခွဲစိတ်စိတ်ဒဏ်ရာ: လူငယ်များအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်နိုင်သမျှ etiology ။ Eur Urol 1995; 27: 306-310
Sommer F, Goldstein I, Korda JB: စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Med 2010; 7: 2346-2358 ။
Ma H၊ Deng C၊ Lin H၊ Liu D၊ Lu K: ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဆင့်နိမ့်ရောင်ခြင်းရောင်ခြင်းကစားခြင်းသည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ နှလုံးရောဂါ။ int J ကို Androl 2012; 35: 653-659 ။
Keller JJ, Liang YC, Lin HC: နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဆက်စပ်မှု - တစ်နိုင်ငံလုံးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med 2012; 9: 1753-1759 ။
Nikoobakht M, Motamedi M, Orandi A, Meysamie A, Emamzadeh A: ဝက်ရူးပြန်ရောဂါယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Urol J ကို 2007; 4: 111-117
Keller J, Chen YK, Lin HC: ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်စပ်မှု - လူ ဦး ရေအခြေပြုလေ့လာမှုမှသက်သေအထောက်အထား။ J ကိုလိင် Med 2012; 9: 2248-2255 ။
Mallet R, Tricoire JL, Rischmann P, Sarramon JP, Puget J, Malavaud B: intramedullary femoral သံရိုက်ပြီးနောက်ငယ်ရွယ်အထီးလူနာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်ပျံ့နှံ့။ Urology 2005; 65: 559-563
Rajbabu K သည်ဘရောင်းကို C၊ Poulsen J: ပေါများသောအရိုးရိုးကျိုးခြင်း၏အတွင်းပိုင်း fixation ခံယူလူငယ်များ perineal ချုံ့ပြီးနောက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ int J Impot Res 2007; 19: 336-338
လီတာဂျေစီ၊ ဂူ CM၊ Tan SB၊ Yue WM - ငယ်ရွယ်သောခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားသောကျောရိုးရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - အနာဂတ်အလားအလာနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ - Siddiqui MA, Peng B, Shanmugam N, Yeo W, Fook-Chong S၊ ကျောရိုး (Phila Pa 1976) 2012; 37: 797-801
Tefekli A၊ Kandirali E, Erol H, Alp T, Köksal T, Kadioğlu A - အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင် Peyronie ရောဂါ - လက္ခဏာများနှင့်ရလဒ်။ Int J Impot Res 40; 2001: 13-18 ။
Tal R, Hall MS, Alex B, Choi J, Mulhall JP: ဆယ်ကျော်သက်များတွင် Peyronie ရောဂါ။ J ကိုလိင် Med 2012; 9: 302-308 ။
Madeo B, Bettica P, Milleri S, Balestrieri A၊ Granata AR, Carani C, Rochira V: citalopram နှင့် fluoxetine တို့၏ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိခြင်း၏သက်သေသာဓက။ တစ် ဦး ကကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled, double- မျက်စိကန်း, ကို double-Dummy, အပြိုင်အုပ်စုတစ်စုလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med 2008; 5: 2431-2441 ။
Yang C, Tang K, Wang B: အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုရောဂါနှင့်ကုသရာတွင်သွေးရည်ကြည် 5-HT အဆင့်၏လက်တွေ့တန်ဖိုး။ Urol Int 2013; 90: 214-218
Kaufman KD၊ Olsen EA, Whiting D၊ Savin R, DeVillez R, Bergfeld W, Price VH, Van Neste D, Roberts JL, Hordinsky M, Shapiro J, Binkowitz B, Gormley GJ: Finasteride သည် androgenetic alopecia နှင့်အတူယောက်ျားများကိုကုသရာတွင်။ Finasteride အမျိုးသားပုံစံဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုလေ့လာမှုအုပ်စု။ J ကို Am Acad Dermatol 1998; 39: 578-589
Irwig MS, Kolukula S: ယောက်ျားများဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် finasteride ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med 2011; 8: 1747-1753 ။
Gleason JM, Slezak JM, Jung H, Reynolds K, Van den Eeden SK, Haque R, Quinn VP, Loo RK, Jacobsen SJ: ပုံမှန်မဟုတ်သောပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Urol 2011; 185: 1388-1393 ။
Malik P: schizophrenia လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Curr Opin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 20: 138-142 ။
Civardi ကို C, Collini တစ် ဦး က, Gontero P ကို, မိုနာကိုက F: Vasiric erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု topiramate- သွေးဆောင်။ Clin Neurol Neurosurg 2012; 114: 70-71 ။
Rochira V, Zirilli L, Orlando G, Santi D, Brigante G, Diazzi C, Carli F, Carani C, Guaraldi G - HAART ခေတ်ရှိအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံထားရသောအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းကျဆင်းခြင်း။ PLoS One 2011; 6: e28512
Radicioni AF, Ferlin A, Balercia G, Pasquali D, Vignozzi L, Maggi M, Foresta C, Lenzi A: Klinefelter ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သဘောတူညီမှုကြေညာချက်။ J ကို Endocrinol Invest 2010; 33: 839-850 ။
Corona, G, Petrone L, Paggi F, Lotti F, Boddi V, Fisher A, Vignozzi L, Balercia G, Sforza A, Forti, G, Mannucci E, Maggi M - Klinefelter ရောဂါ၏ဘာသာရပ်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Int J ကို Androl 2010; 33: 574-580 ။
Yoshida A၊ Miura K၊ Nagao K၊ Hara H, Ishii N, Shirai M - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် Klinefelter's syndrome ရောဂါရှိသည့်လူနာများ၏ယောက်ျားအင်္ဂါမစုံလင်မှုတိုင်ကြားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအချက်များ။ Int J ကို Androl 1997; 20: 80-85 ။
Young က J: မွေးရာပါ hypogonadotropic hypogonadism နှင့်အတူအထီးလူနာချဉ်းကပ်။ J ကို Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 707-718 ။
Uzaran အို၊ Bolu E၊ Saglam K - စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဘဝအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝငယ်ရွယ်သော hypogonadotropic hypogonadal အထီးများနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာခြင်း။ ဤအခြေအနေများအပေါ်ကုထုံး။ Endocr J ကို 2012; 59: 1099-1105 ။
Bouvattier C၊ Mignot B၊ Lefèvre H၊ Morel Y, Bougnères P - ယောက်ျားအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအားနည်းခြင်း၊ J ကို Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 3310-3315 ။
Salenave S, Trabado S, Maione L, Brailly-Tabard S, Young J: ယောက်ျားသည် hypogonadotropic hypogonadism: ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ အမ်း Endocrinol (ပဲရစ်) 2012; 73: 141-146
Fraietta R, Zylberstejn DS, Esteves SC: Hypogonadotropic hypogonadism ပြန်လည်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဆေးခန်းများ (ဆော်ပေါ်လို) 2013၊ 68 (suppl 1): 81-88
Taskinen S, Hovatta O, Wikström S: cryptorchidism ကုသမှုခံယူနေသောလူနာများတွင်လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ Scand J ကို Urol Nephrol 1997; 31: 361-364
Huang Y, Pan L, Xia X, Feng Y, Jiang C, Cui Y: အရွယ်ရောက်ကြွက်များတွင်လိင်တံ cavernosal ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် phytoestrogen daidzein ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Urology 2008; 72: 220-224
Pan L, Xia X, Feng Y, Jiang C, Cui Y, Huang Y: လူငယ်ကြွက်များ၏ phytoestrogen daidzein နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၌ဆေးရည်နှင့်ပတ်သက်သော Erectile function ကိုပျက်စီးစေသည်။ J ကို Androl 2008; 29: 55-62 ။
Siepmann T က, Roofeh J ကို, Kiefer FW, Edelson DG: ပဲပုပ်ထုတ်ကုန်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် Hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အာဟာရ 2011; 27: 859-862
Veronelli A, Masu A, Ranieri R, Rognoni C, Laneri M, Pontiroli AE: သိုင်းရွိုက်ရောဂါများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်အတူအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ int J Impot Res 2006; 18: 111-114
Heidler S, Temml C, Broessner C, Mock K, Rauchenwald M, Madersbacher S, Ponholzer A: ဇီဝဖြစ်စဉ်လက္ခဏာဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာသည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်တစ်ခုလား။ J ကို Urol 2007; 177: 651-654 ။
Martins FG, Abdo CH: 18-40 နှစ်သက်တမ်းရှိဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုအချက်များ။ J ကိုလိင် Med 2010; 7: 2166-2173 ။
Elbendary MA, El-Gamal OM, Salem KA: 40 နှစ်အောက်အီဂျစ်လူနာများအတွက်အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များအားလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။ J ကို Androl 2009; 30: 520-524 ။
Tang J, Tang Y, Dai Y, Lu L, Jiang X: vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အချိန်မှန် pharmacopenile Doppler ultrasonography စဉ်အတွင်း intracavernous ဆေးထိုးနှင့် audiovisual လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အသုံးပြုမှုကို။ Urol Int 2013; 90: 460-464
Esposito K၊ Giugliano F, Di Palo C, Giugliano G, Marfella R, D'Andrea F, D'Armiento M, Giugliano: D: အဝလွန်သောအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ JAMA 2004; 291: 2978-2984 ။
Hsiao W, Shrewsberry AB, Moses KA, Johnson TV, Cai AW, Stuhldreher P, Dusseault B, Ritenour CW: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Erectile လုပ်ဆောင်ချက်အညွှန်းကိန်းအရလေ့ကျင့်ခန်းသည် 40 အောက်ရှိအမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော erectile လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ J ကိုလိင် Med 2012; 9: 524-530 ။
Evliyaoğlu Y၊ Yelsel K၊ Kobaner M, Alma E, Saygılı M: Tedalafil ၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံနိုင်မှုသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်ယောက်ျားများသည် serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကိုတားဆီးပေးသည်။ Urology 2011; 77: 1137-1141
Stryjer R၊ Spivak B, Strous RD, Shiloh R, Harary E, Polak L, Birgen M, Kotler M, Weizman A: Trazodone သည် serotonin မှတားဆီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတားဆီးနိူင်သည်။ Clin Neuropharmacol 2009; 32: 82-84 ။
Rao DS, Donatucci CF: Vasculogenic ခွန်အားမရှိခြင်း။ သွေးကြောနှင့်သွေးပြန်ကြောခွဲစိတ်။ Urol Clin မြောက်အမေရိက Am 2001; 28: 309-319
Munarriz R: Penile microvascular arterial bypass ခွဲစိတ်မှု - လက္ခဏာများ၊ ရလဒ်များနှင့်ပြicationsနာများ။ ScientificWorldJournal 2010; 10: 1556-1565 ။
Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer K: 18 74 နှစ်အရွယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုများ၊ ပြproblemsနာများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု။ Scand J ကို Sexol 1999; 2: 79-105 ။
Béjin A: အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်သူနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်စပ်မှုရောဂါ။ Andrologie 1999; 9: 211-225
Laumann EO, Paik A, Rosen RC: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ခန့်မှန်းသူများ။ JAMA 1999; 281: 537-544
Martin-Morales A၊ Sanchez-Cruz JJ၊ Saenz de Tejada I, Rodriguez-Vela L, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R: ပျံ့နှံ့မှုနှင့်စပိန်၌ Erectile disfunction အတွက်လွတ်လပ်သောစွန့်စားမှုအချက်များ - Epidemiologia de la DisfunciónEréctil Masculina လေ့လာချက်။ J ကို Urol 2001; 166: 569-574 ။
Braun M၊ Wassmer G၊ Klotz T, Reifenrath B, Mathers M, Engelmann U: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ - 'Cologne အမျိုးသားစစ်တမ်း' ၏ရလဒ်များ။ Int J Impot Res 2000; 12: 305-311 ။
မိုက်ကယ် Phillips က, MD
ရော့စ်ခန်းမ, 2300 မျက်လုံးလမ်း, ဘ
ဝါရှင်တန်ဒီစီ 20037 (ယူအက်စ်)